Ngaba ukunciphisa iikhrim kuyasebenza ngokwenene? -Uzikhathalela njani ngokwakho | Amadoda aQinisekileyo
Ngaba ukunciphisa iikhrim kuyasebenza ngokwenene?
UAlicia tomero | | Ukunyamekela
Amadoda afuna ukuba nomzimba ogqwesileyo Kwaye koku basebenzisa ukunciphisa iikhrim ukuba bazive bonwabile. Kule meko, uninzi lwabo luyayilahla inyani yokungaziva njengolu hlobo lwemveliso kuba bekholelwa ukuba ayikholisi.
Olu hlobo lokunciphisa iikhrim Ziyimveliso eyilelwe ukushenxisa amanqatha asekhaya kunye nokunganciphisi ubunzima. Kufuneka sicinge ukuba bayasebenza kwaye bayasebenza, kodwa kufuneka badityaniswe nothotho lweemfuno ekufuneka kufikelelwe kuzo. Nangona kunjalo, njengoko bekulindelekile ukunciphisa iikhrim azenzi mimangalisoKodwa ukuba yenziwe ngokuchanekileyo, inokuhlawula.
1 Iindidi zeekhrim kunye nendlela ezisebenza ngayo
2 Ndingazisebenzisa njani ezi zithambiso?
3 Iindidi zeekhrim kunye nezinto abazibonisayo
3.1 Ab- Ukunciphisa iGel yasebusuku
3.2 Somatoline yamadoda
3.3 I-Amix Fat Burner
3.4 I-Thiomucase Isinqe kunye nesisu esitshisayo seFat
3.5 Umphathi weGel Reductline XXL
Iindidi zeekhrim kunye nendlela ezisebenza ngayo
Ezi ntlobo zeekhrim ziza ngeendlela ezimbini: ijeli kunye nokhilimu. Ijeli yokunciphisa isebenza ngesenzo eshushu esivelisa ubushushu okanye ingqele kuloo ndawo kwaye ngaloo ndlela isebenze ukujikeleza kwegazi. Ukunciphisa iikhrimu kunezinto zokuthambisa ezinje nge-ginseng okanye i-caffeine ukwenza oku kujikeleze.
Injongo yokwenza olu hambo lusebenze kuya kunceda ekupheliseni ngokulula ngakumbi iidiphozithi ezihlanganisiweyo. Kodwa akufanelekanga ukufaka ukhilimu kwaye kunjalo, ukwenza uhlobo oluthile lokuzilolonga imihla ngemihla yenza ukuba ukujikeleza kwakho kusebenze kuya kukunceda ngakumbi.
Ukudityaniswa kwezi ndlela zimbini kunokulingana ngokugqibeleleyo, ngumcimbi wokudibanisa ezi gel okanye iikhrim kunye nezemidlalo kunye nokutya okuhle, kwaye ngaphezu kwako konke une «ukuzingisa ". Ingxaki ekuphela kwayo eyenzeka kwezi gel kukuba zingena kuphela kumaleko angaphezulu kwesikhumba kwaye ke ngamanqatha asezantsi kakhulu soze isuswe. Ngamanye amagama, ukuba unesisu esikhulu sebhiya, ipesenti yokubona iziphumo iya kuba ncinci kakhulu okanye inzima kakhulu.
Into emnandi ngezi cream kukuba zikwanazo nezinto zokuthambisa nezokuqinisa. Ukuba uyisebenzisa ngokungaguquguqukiyo, ngaphandle kokunciphisa iisentimitha ezimbalwa, uya kuqinisa ulusu kunye neethoni, uya kuqaphela isikhumba esikroliweyo.
Ndingazisebenzisa njani ezi zithambiso?
Ngokufanelekileyo, kabini ngosuku. Xa usifaka isicelo, kuya kufuneka wenze imassage yokuhambisa amanzi ngezandla zakho, apho uya kwenza khona ukujikeleza okujikelezayo kunye nokungena okuthe ngcembe kwindawo leyo ukuze kusebenze ukujikeleza kwegazi. Emilenzeni ezi zithambiso ziya kuba phezulu, esiswini nasezimpundu ziya kuba sisetyhula.
Njengengcebiso kwaye iiasethi zezi khrim zingena ngcono kakhulu Kulungile ukuba uzisebenzise emva kokuhlamba kwaye ukuba kunokwenzeka ukuba ulukhuphe ulusu lomzimba wakho, Ukuphelisa iiseli ezifileyo kwaye unike ikrimu yokunciphisa. Nangona kunjalo, umenzi ngamnye angachaza indlela eyahlukileyo yokhilimu wabo, ke ngekhe kube buhlungu ukufunda amanqaku abo.
Iindidi zeekhrim kunye nezinto abazibonisayo
Kukho izinto ezithile zokunciphisa izithambiso emadodeni, kuba amanqatha abawufumanayo ahlukile kunabafazi. Bacwangciselwe ngakumbi ukuba bayiqokelele kwisisu nakwindawo esinqeni, ngelixa abasetyhini ezinqeni nasemilenzeni, kwaye uninzi lwabo lisesinqeni. Kweli candelo senze umnxeba ngeekhrim ezithengiswa kakhulu emarikeni kwaye sichaza into nganye enikezela ngayo:
Ab- Ukunciphisa iGel yasebusuku
Kukhawulezisa ukutshiswa kwamanqatha kwaye kunciphisa kwaye kuchaze indawo yesinqe nesisu. Ukutsha kwayo kukhawulezisa ukutshisa kwe-lipolytic ukuya kuthi ga kwi-170%, isuse amafutha asendaweni kwaye inezinye izinto ezisebenzayo ezithintela ukufunyanwa kwamafutha eemolekyuli kwiiadipocytes.
Le cream kunciphisa amanqatha esinqeni nakwisisu kwiintsuku ezisi-7 kwaye ngelixa ulele. Izinto ezisebenzayo ezisekwe kwi-algae, ibhotolo ye-shea, ityuwa yolwandle kunye nodongwe olumhlophe kunye nezinye ezizezinye ziya kunceda ukunciphisa amanqatha aqokelelweyo kunye nokwakheka kwawo. Iya kunceda ukukhuthaza amanzi ukuze ikwazi ukususwa ngokulula.
I-Amix Fat Burner
Le gel ine isiphumo sokufudumeza esithanda ukuhamba kwegazi ukuphelisa amafutha asekhaya. Inokwakheka kwezinto ezingama-20 zebhayoloji eziya kwenza ulusu lube luninzi ngakumbi kwaye lunciphise uxinzelelo lwe-oxidative.
I-Thiomucase Isinqe kunye nesisu esitshisayo seFat
Inentshukumo ye-enzymatic esebenza kwimetabolism yamafutha. Yenza i-enzymes enoxanduva lokuhlanganisa kunye nokuphelisa ii-acid ezinamafutha kwi-adipocyte kwaye ngenxa yoko itshise amanqatha agciniweyo. kwaye uyijike ibe ngamandla. Inezinto ezinokuthintela ukubunjwa kweeseli ezintsha zamafutha.
Umphathi weGel Reductline XXL
Le gel yenye anti-cellulite enika iziphumo ezilungileyo kakhulu. Yenziwe ngezicatshulwa zezityalo kunye ne-algae (ivy, fucus, ihashe chestnut, iguaranine) kunye necaffeine. Wonke umntu Ezi zinto zinceda kakhulu ekupheliseni ukungafumaneki kwamafutha kwaye ishiya ulusu olugudileyo ngaphandle kokugogeka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Ngaba ukunciphisa iikhrim kuyasebenza ngokwenene?
Iindlela zokwenza umthambo
Yintoni oza kuyitya ngaphambi kokuba uzilolonge